၃၀ ကျော်ဖီလင် (new version) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » ၃၀ ကျော်ဖီလင် (new version)
၃၀ ကျော်ဖီလင် (new version)
Posted by Moe Z on Oct 31, 2011 in Creative Writing, Critic, Drama, Essays.. | 27 comments
မှန်ထဲကကိုယ့်ပုံကိုယ်ကြည့်မိတော့ အပျော်လွန်နေတဲ့ပုံက ဖုံးမရဖိမရ မျက်နှာပေါ်မှာအတိုင်းသား။ အင်း … ဒီလောက်ကြီးသိသာနေလို့တော့မဖြစ်ဘူး၊ နည်းနည်းတော့ဟန်ဆောင်ရဦးမယ်။ ဘယ်လောက်ကြီးပဲ ကျေနပ်ပျော်ရွှင်နေဦးတော့ မျက်နှာ အမူအရာမှာ လုံးဝပေါ်နေလို့မဖြစ်။ ကိုယ်ကမိန်းကလေး အသက် ၃၄ နှစ်ပြည့်ပြီးတဲ့အထိ ယင်ဖိုတောင်မသန်းခဲ့ဖူးတာ ပတ်ဝန်းကျင်အသိုင်းအ၀ိုင်းကလည်းသိနေတာပဲ။ အိမ်ထောင်ကျပြီးတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေရဲ့ပျော်ရွှင်စရာမိသားစုလေးတွေတွေ့ရင် အားကျစိတ်ဖြစ်မိပေမယ့် လုံးဝမပေါ်လွင်စေပဲ သူတို့ကကိုယ့်ကို ပြန်အားကျအောင်နေပြနိုင်ခဲ့သူပဲ။ အခုမှကြီးဒေါ်တွေကောင်းမှုနဲ့ နိုင်ငံခြားကပြန်လာတဲ့ သဘောင်္သားတစ်ယောက်က ကမ်းလှမ်းလို့စွံရတော့မယ်။ သတို့သားလောင်းက ကိုယ့်ထက် ၃ နှစ်လောက်ငယ်နေတာတော့ သိပ်သဘောမကျပေမယ့် ကိုယ်တိုင်ကလည်းအစွမ်းအစရှိသူ (ယောက်ျားတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်)မဟုတ်တော့ လက်ခံလိုက်ပါတယ်။ ပုံစံကတော့ မိန်းကလေးတွေကျမယ့် ရုပ်ရည်မျိုးပဲ။ သဘောင်္သားတွေက သိပ်စိတ်မချရပေမယ့် သူ့အမေနဲ့ကိုယ့်အဒေါ်က သူငယ်ချင်းအရင်းခေါက်ခေါက် အသိုင်းအ၀ိုင်းလည်းမဆိုးဘူးဆိုပြီး မိဘတွေကသဘောတူကြတယ်လေ။
မနက်ဖြန်ဆိုရင်လူကြီးစုံရာရှေ့ စေ့စပ်ရတော့မယ်၊ ၁ လခြားပြီးမင်္ဂလာပွဲလုပ်မှာဆိုတော့ လုပ်စရာတွေကလည်းများသား။ အရင်ဆုံးကိုယ်အရမ်းကြိုက်တဲ့ ကော်ဖီတောင်ဖြတ်ထားတယ် အသားအရည်အတွက်မကောင်းဘူးဆိုလို့၊ မင်္ဂလာပွဲမှာ အလှဆုံးဖြစ်ချင်တယ်လေ။ ကိုယ်ကသတို့သားထက်အသက်ကြီးတာ မပေါ်ဖို့လည်းအရေးကြီးတယ်။ ကိုယ့်ညီမတွေကတော့ ပြောပါတယ်၊ ယှဉ်ကြည့်ရင် ကိုယ်ကသတို့သားထက် အများကြီးငယ်တဲ့ပုံတောင်ပေါက်တယ်တဲ့။ အခုထိ အဆီပိုမတက် သေးတဲ့ခါးရယ် ၅ပေကျော်တယ်ဆိုရုံလေးရှိတဲ့အရပ်ကြောင့် ရှိရင်းစွဲအသက်ထက်ငယ်ပိုငယ်ပုံရတာထင်ပါရဲ့။ ညီမတွေက ကိုယ့်ထက်တောင်ပျော်နေကြသေးတယ်။ အ၀တ်အစားတွေလည်း သူ့ထက်ငါအပြိုင်အဆိုင်ချုပ်ကြ ၀ယ်ကြပေါ့။ ကိုယ့်ကျောင်းကိုလည်း ဟန်းနီးမွန်းအတွက်ခွင့်တင်ရဦးမယ်။ လောကကြီးက အခုတော့လည်း ပျော်စရာကြီးပါပဲလား……..
သြော်.. အပျော်လွန်ပြီးမေ့နေလိုက်တာ ဒီနေ့အင်္ကျီတွေသွားရွေးရဦးမှာပဲ။ ကိုယ်တိုင်ဆွဲထားတဲ့ဒီဇိုင်းတွေကို ကိုယ့်စိတ်တိုင်းကျချုပ်ပေးနေတဲ့စက်ချုပ်ဆိုင်လေ။ ဆိုင်ဆိုပေမယ့် အဲဒီထဲရောက်ရင် ပန်းဥယျာဉ်ကြီးထဲရောက်သွားသလိုပဲ ခြံဝင်းအကျယ်ကြီးထဲမှာ ပန်းပေါင်းစုံစိုက်ထားတာ အရမ်းလှတယ်။ ဟိုရောက်တော့ ဂါဝန်တစ်ထည်ကနည်းနည်းပြင်ရမယ် ဆိုတော့ ကိုယ်ကလည်းရတယ် OK ပန်းခြံထဲလျှောက်ကြည့်ရင်းစောင့်မှာပေါ့။ ပန်းတွေကလည်း ဘယ်အချိန်ကြည့်ကြည့် လှနေတာပါပဲလား ကိုယ်ကပဲအရာရာကိုခါတိုင်းထက် အကောင်းမြင်နေလို့ပဲလား ဒီတစ်ခေါက်ပိုလှနေသလိုပဲ။ ကိုယ်အရမ်းကြိုက်တဲ့ ကတ်တလီယာသစ်ခွတွေကို ငမ်းနေရင်းကြားလိုက်ရတဲ့အသံကြောင့် အသာနားစွင့်မိတယ်…..
“အဲဒီတော့ဘာလဲ ရှင်က ၁၀နှစ်ကျော်စောင့်လာတဲ့ကျွန်မကို သစ္စာဖောက်တော့မယ်ပေါ့”
“ဆောရီးကွာ ကိုယ်လည်းမေမေ့ကိုယ် မလွန်ဆန်နိုင်ဘူး၊ ကိုယ်ဒီအခြေအနေထိဖြစ်လာတာ မေမေ့ကြောင့်ပဲ”
သမီးရည်းစားစုံတွဲ ရန်ဖြစ်နေတယ်ထင်တယ်။ ဒီဆိုင်မှာ ကောင်မလေးတွေအများကြီး ဒီဇိုင်နာလောင်းလေးတွေရော
“ရှင်….ရှင် ဒီလိုပြောရုံနဲ့ပြီးသွားရောလား ကျွန်မဗိုက်ထဲက ကလေးကရော..”
“အဲဒါတော့ ဖျက်လိုက်ပေါ့ကွာ ကိုယ်လည်းမတတ်နိုင်ဘူး”
ဘုရားရေ….ဘယ်လိုယောက်ျားမျိုးပါလိမ့်.. ကိုယ့်ရဲ့စပ်စုချင်စိတ်က ဘယ်လိုမှတားမရ ပန်းပင်တွေကြားကချောင်းကြည့်မိပါတယ်။ အဲဒီမှာ ကိုယ့်ခေါင်းပေါ်တည့်တည့် မိုးကြိုးပစ်ချလိုက်သလိုခံစားလိုက်ရသည်။ ထိုသကောင့်သားက ကိုယ့်ရဲ့သတို့သားလောင်းလေ……..။
ဒီနေ့ ကိုယ့်ရဲ့စေ့စပ်ပွဲနေ့ အားလုံးကကိုယ့်ကိုပြောကြတယ် အရမ်းလှတယ်တဲ့။ လူကြီးတွေအားလုံးလည်း စုံနေကြပြီ ဘာတွေပြောနေကြလည်းမသိ ကိုယ့်နားထဲတော့တစ်လုံးမှမ၀င်၊ ဘေးကမေမေကလက်တို့တော့မှ သတိပြန်ဝင်လာတယ်။ ရုပ်ရှင်တွေထဲမှာမြင်ဖူးသလိုထုံးစံအတိုင်း သူမရဲ့သဘောထားကိုမေးတဲ့အခါ……
ကိုယ်သွားလေရာယူသွားတတ်တဲ့ ဖုန်းနဲ့အဲဒီနေ့ကရိုက်ခဲ့တဲ့ပုံကိုပြပြီး သူ့မျက်နှာတည့်တည့်ကြည့်ကာ
“sorry ပါ ကျွန်မဒီလိုတာဝန်မဲ့တတ်တဲ့ယောက်ျားတစ်ယောက်ကို လက်မထပ်နိုင်ပါဘူး ခွင့်ပြုပါဦး”
ပြောပြီးတာနဲ့ ကိုယ့်အခန်းထဲတန်းဝင်ခဲ့လိုက်ပါတယ်။ အားလုံးလည်းကိုယ့်ကို နားလည်ကြမယ်ထင်ပါတယ်။ ဒီလိုယောက်ျားမျိုးတွေ နဲ့ပဲတွေ့ရရင် ကိုယ်ကတော့ဂုဏ်သိက္ခာရှိစွာနဲ့ အပျိုကြီးအဖြစ်နဲ့ပဲ ဆက်လက်ရပ်တည်နေရဦးမှာပါ။ ။
(အရင် ၃၀ကျော်ဖီလင်ရဲ့ အဆက်၊ မမက အပျိုကြီးပဲလုပ်တော့မယ်တဲ့ :P)
ပဲကြီးလှော်တထုတ်ထဲပေမဲ့ ကိုယ်စပြီး စားလိုက်မိတဲ့ပဲကြီးလှော်က မာတာတာဖြစ်ပြီး ဝါးလို့မရတာနဲ့
အထုတ်ထဲက ပဲကြီးလှော်တွေအားလုံးမကောင်းဘူးလို့ မယူဆပါနဲ့။
အဲ ပဲကြီးလှော်ဆိုတော့လဲ စားလို့ကောင်းတဲ့ ဟာကို စားပြီးလို့ရှိရင်တောင်
ဟဲ ဟဲ သဘာဝပါနော်။
ကိုသစ်မင်း မန့်တာ ကို ရီတာနော် .
သင်္ဘောသားတွေ..တယ်လဲ မလွယ်ပါလား….(ဦးဖောနဲ့ရွာထဲက သင်္ဘောသီးတွေမပါ :D )
ဆာသစ်ပြောသလို..အထုပ်ထဲမှာ ပဲကြီးလှော်ကောင်းကောင်းလေးတွေ ရှိပါသေးတယ်..
ဆာသစ်ပြောမှ ယောက်ျားတွေလဲ ပဲကြီးလှော်တွေဖြစ်ကုန်ကောဗျာ
ပဲကြီးလှော် မားကတ်တင်း စထွာဒဂျီ
ဦးဖော နုစဉ်အခါတုန်းက တော်တော်ဆိုးတယ်လို့ ကိုယ်တိုင်ဝန်ခံဖူးတယ်လေ
မယုံရင်အင်တာဗျူးလုပ်ကြည့် (just kidding uncle FR )
အရေထူနေပါပြီ ကို ပေါက်ဖော် ရယ် ။
အဘတို့ သင်္ဘောစလိုက်တဲ့ ၁၉၈၀ နှင့် ၉၀ လောက်ကြားမှာ
သင်္ဘောသား ခေတ်တစ်ခေတ် ထလိုက်သေးတာကိုး ။
အဲဒီမတိုင်ခင်ကဆိုရင်တော့ ဆရာဝန် အင်ဂျင်နီယာ စစ်ဗိုလ် ခေတ်ပေါ့ဗျာ ။
အဲဒီ အချိန်ပိုင်း အတွင်းမှာတော့ ရှိရှိသမျှ VDO တွေ ရုပ်ရှင် တွေမှာ
မင်းသား နှင့် မင်းသမီးရဲ့ ချစ်ချင်းကိုခွဲမယ့် မိဘက အထူးသဘောတူနေတဲ့
ဗီလိန်နေရာဆိုရင် သင်္ဘောသားတွေချည်းပဲ ။
အမှန်ပြောရရင်တော့ ကိုယ်တွေ (သင်္ဘောသားတွေ) ကလည်း
ငယ်ငယ် ရွယ်ရွယ် မရင့်ကျက်သေးချိန်မှာ ပိုက်ဆံ ခပ်များများကိုင်ရတော့
လူငယ်သဘာဝ ဆိုးခဲ့တာတွေလည်း ရှိပါတယ် ။
ဒါပေသည့် နိုင်ငံတကာလှည့်နေတဲ့ ပညာတတ်တွေဆိုတော့
ရုပ်ရှင်ထဲမှာ ရိုက်သလိုတော့ မိန်းမငါတ်နေတဲ့ ပေါတောတောတွေတော့
မိန်းမများ ငါတ်စရာလား တချို့လူငယ် သင်္ဘော အရာရှိတွေဆို
တင်မိုးလွင် ဂျွန်လွင် ချိုကြီး ကသင်တန်းဆင်းထားတဲ့
ရှိရှိသမျှ Model ပေါက်စလေးတွေ နှင့်
လှည့်ပါတ်ပြီး အိပ်နေကြတာပဲဟာ ။
မိန်းမများ ရိုးလွန်းလို့ အလွတ်တောင်ရနေပြီ ။
အဲဒီ Model တို့ရဲ့ ခယောင်းလမ်း အကြောင်း ရေးပါအုံးမယ် ။
အိုကြီးအိုမကြမှ ရွာသူတွေ ဝိုင်းဆဲခံရမှာလည်း
ရေးရင် ဝိုင်းဆဲမှာလားဟင် ။ :p
ဦးဖောရယ် မိုးစက်က ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်မှာ တကယ်မြင်နေရတာကိုပဲရေးတာပါ
ဒီပို့စ် ၂ခုမှာတော့ နည်းနည်းနောက်ချင်တာနဲ့ အရေးအသားကခနဲ့သလိုဖြစ်နေတာထင်တယ်
စောင့်ဖတ်နေဒလယ် နော် အဘဖော
ဆဲပါဝူး ဘရာ ..
တားတို့လို ချာတိတ်တွေ ပညာရအောင်
(မလုပ်သင့်တာ ရှိရင်လည်း မလုပ်ရအောင်
လုပ်လို့ရတာဒွေချိရင်လည်း အဟဲ ပရီကောရှင်းယူလို့ရအောင် …အဟီး..)
ချစ်ကင်းဆု ဖော်ဒဆိုးလ် လေးတွေပဲကို …နော်..ညန်ညန်လေး…
မော်ဒယ်တို့ ရဲ့ ခရောင်းလမ်းလေး..ဗဟုသုတအလို့ ငှာ ဖတ်ချင်ပါတယ်..
စားပြီး အချိန်တန်ရင် ဗိုက်လဲ နာဘို့ လိုတယ်လေ ညီရဲ့။အိုဂျီတွေဘာတွေ အထိအရောက်ပို့ပေးသော
“သဘောင်္သားတွေက သိပ်စိတ်မချရပေမယ့်” အဲဒီထဲမှာ အနော် မပါဘူးနော် မမမိုးဇက်။
ဒါမျိုးတော့ ခွင့်လွတ်ဘူး၊ အားပျိုကြီး ဘဝနဲ့ နေလိုက်အုံးမယ်ပေါ့။
ကိုသစ်မင်းရယ် အားလုံးကိုသိမ်းကြုံးပြီး ကောက်ချက်ချလို့မရတာမှန်ပေမယ့်
ပထမဆုံးစားလိုက်တဲ့ ပဲကြီးလှော်(ကိုသစ်မင်းရဲ့ဥပမာ)ကြောင့် သွားနာသွားရင်
ဟုတ်တယ် သင်္ဘောသီး က အစိမ်းဆို သုပ်စား..
အဲ့ ..အခန့်မသင့်ရင် ဗိုက်နာတတ်တယ်…..(အားလုံးတော့ မဟုတ်ဘူးပေါ့နော့်..)
ဘယ်သူမဆိုဖြစ်နိုင်ပါတယ် အဓိကက လူ့စိတ်ဘဲ
ဟောဗျာ…ဖတ်ရင်းဖတ်ရင်း နဲ့ 
နောက်ဆုံးတော့ မင်းသမီး နာမည် က “မမ” တဲ့
အဲ့လောက် လူစိတ်မရှိတဲ့ လူ ..စားပြီးနားမလည် ၀ါးပြီး ထွေးထုတ်တဲ့ကောင်အကြောင်း လူသိရှင်ကြားဖွင့်ပြောပေးရမှာ … ဒါမှ လူကြီးတွေ ဘိုင်ဖို့စ်ပေးပြီး ယူခိုင်းလျှင် ယူခိုင်းမှာ … ။
သူငယ်ချင်း သဘောင်္သီးတွေရှိတယ် … အတော်ကဲတဲ့ကောင်တွေချည်းပဲ … ။ တစ်ခါတစ်ခါ မေးရတယ် .. နင်တို့ အိမ်ရော ပြန်ဖြစ်ကြရဲ့လားလို့လေ … ။
ဒီလိုလူမျိုးတွေက သဘောင်္သားမှ မဟုတ်က်ပါဘူး
စိတ်ဓာတ်အောက်တန်းကျတဲ့သူ ဘယ်သူမဆို ဖြစ်နိုင်ပါတယ်လေ
ဟုတ်ပ၊ မိုးဇက်အမတကယ်ကံကောင်းတာ။ ဒီလိုအဖြစ်မျိုး ရုပ်ရှင်ထဲမှာဘဲ ကြည့်ဘူးတာ။ အပြင်မှာ ဒဲ့ကြုံရဖို့မလွယ်ဘူး။ နားရင်းရိုက်ဖို့ကောင်းတဲ့ ဘဲ။
ဒါမှ အပျိုကြီး ဖြစ်ရတာ ပိုဂုဏ်ရှိတယ် ဆက်လုပ်။ အားပေးတယ်။ ဘယ်နှယ်တော် ဘယ်လိုလူမျိုးတွေနဲ့ လာတွေ့နေပါလိမ့်… သင်္ဘောသီးတွေမှမဟုတ် စိတ်ထဲယုတ်ညံ့တဲ့သူတွေက ခေါင်းမှာ စာမကပ်ထားတဲ့အတွက် ရှေ့တစ်မျိုးကွယ်ရာတစ်မျိုး ပြောတတ်တဲ့သူတွေကို ဝေးဝေးကရှောင်တာ အကောင်းဆုံးပဲ။
ဟုတ်တယ် မမ မနောရဲ့ တစ်ချို့ဆိုကြည့်လိုက်ရင် တကယ့်လူကြီးလူကောင်းပုံစံမျိုးနဲ့ ထင်ရက်စရာမရှိဘူး… အစ်မတော်ကလည်း ယောက်ျားတွေကိုတစ်ယောက်ထဲနဲ့ စိတ်ကုန်သွားပါပြီတဲ့
မရွှေအိတို့ မနွယ်ပင်တို့ပြောသလိုပဲ အစ်မကတကယ်ကံကောင်းတယ်